LIONS CLUB : Nitondra fanampiana ho an’ireo sahirana ara-pivelomana eto Mahajanga
Nandritra ny roa andro no nanatanterahana ity hetsika tolotra ara-pahasalamana ho an’ny vahoaka tena sahirana eto Mahajanga ity, dia ny sabotsy sy alahady 27 oktobra 2019 tontolo andro teo nanoloana ny paositra Mahajanga be. 29 octobre 2019
Fitiliana ireo karazan’aretina maro, fizahana ara-pahasalamana toy ny diabeta, ny tosi-dra ary fitsaboana, dia ny fanomezana ny fanafody sahaza ny aretina no tolotra nataon’ity fikambanana iraisam-pirenena efa naharitra roa amby zato taona nijoroany, raha enim-polo taona amin’io taona ho avy io kosa no hankalazana ny tsingerin-taona nijoroan’izany teto Madagasikara. Ambohi-pihaonan’ny mpikambana Lions mahery ny roanjato isa no tonga nanatanteraka ity fivoriam-be atao eto Mahajanga mampian-trano izany tamin’ity taona ity. Tsy vao sambany akory no nanao izao tolotra ara-pahasalamana ho an’ny marefo ara-pivelomana eto Mahajanga ity fikambanana iray ity, fa efa imbetsaka izy ireo no manao izany, hoy i Lions Cmjp Ny Fanja Rakotomalala, governora ny distrika 417.
Ny distrika ny 417 dia ivondronan’ireo Lions aty amin’ny fari-dranomasin’ny oseana indiana, dia ireo nosy rahavavy sy i Djiboti, izay samy nahatonga solontena tamin’izao fivoriam-be izao, notronin’i Fidy Rakotozafy, governoran’ ny Lions teo aloha nanome voninahitra ny lanonam-panokafana ny misandratr’andro ny sabotsy teo.
Ho an’ity tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana ity, dia anisany tafiditra ao anatin’ny velirano fahadimin’ ny Filoham-pirenena, hoy ny manam-pahefana, dia ny "fahasalamana ho an’ny rehetra amin’ny fotoana rehetra". Tan-tsoroka ho an’ny fanjakana no nataon’ity fikambanana ity, hoy hatrany ireo nifandimby nikabary. Trano heva miisa dimy no nandraisana ireo vondron’olona marefo tonga nitsabo sy nitily ny toe-pahasalamany tao izay nahitana ny fitiliana diabeta sy ny tosi-dra niarahana tamin’ny fikambanana Amadia.
Teo koa ny fanalana nify, ny fitsaboana katarakta, izay tena namantarana ity fikambanana ity hatramin’izay ary ny fanomezana ireo karazam-panafody mifandraika tamin’ny fitsaboana natao azy ny marary tonga tao ny andro voalohany. "Azo tsaboina ny katarakta, vonjeo ny masona" no teny filamatra nisalorana tamin’izao fitsaboana maso izao, satria jiron’ny tena ny maso, koa nanentanan’ireo mpikambana ho tonga hitsabo izany mandritra ny roa andro teo.
Mpilatsaka an-tsitra-po ireo mpikambana mandrafitra ny fikambanana Lions club, ary tsy misy karamaina na tambiny ny asa sosialy ataon’izy ireo fa maimaimpoana avokoa, koa misokatra ho an’ny olona terem-panahy ny amin’izany ny fikambanana, rehefa mifanaraka amin’ny mason-tsivana misy ao aminy. Misy kosa ny latsakemboka aloan’ny mpikambana tsirairay isam-bolana anodinana ny fikambanana, hoy ny tompon’andraikitra, izay mitovy amin’ny fikambanana rehetra. Tontosa sy tanteraka izao hetsika izao dia noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny mpiara-miombon’antoka, toy ny holafitry ny mpitsabo nify sy ny fahasalamam-bahoaka, ny fikambanana Amadia, ny banky Boa, ny orinasa star. Ary ny Tvhfb no nandrindra ny lafiny filaminana sy fandriam-pahalemana teto, izay nisaoran’ny governora ny 417 azy ireo. Fitopolo no isan’ny fikambanana mandrafitra ny Lions eto Madagasikara, raha efa aman-jatony ny mpikambana misy ao.